Amazon Top Sellers Multi-function Large capacity kitchen tool plastic kitchen tools spice jar set/spice rack set factory and manufacturers |Hanying
အမေဇုံထိပ်တန်းရောင်းအား Multi-function ကိုအကြီးစားစွမ်းရည်မီးဖိုချောင် tool ကိုပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင် tools တွေကိုအမွှေးအကြိုင်အိုးတလုံးအစုံ / အမွှေးအကြိုင်ထိန်သိမ်းထား
Overview Quick Details Type: Herb & Spice Tools Herb & Spice Tools Type: Herb & Spice Tools Material: Plastic Plastic Type: PP Certification: CE / EU, SGS Feature: Eco-Friendly, Stocked Place of Origin: ...
ပျိုးပင် & Spice Tools များ
ပျိုးပင် & Spice Tools များရိုက်ထည့်ပါ:
အီး / ဥရောပသမဂ္ဂ, SGS
ဟန် Ying ကဒုတိယ Multi-function ကိုပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင် tools တွေကိုအမွှေးအကြိုင်အိုးတလုံးအစုံ / အမွှေးအကြိုင်
38 * 19.5cm
နေ့နှုန်း 7000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
4pcs နှင့်အတူ 45 * 45 * 41cm,
1. နမူနာအဘို့အ FedEx / DHL / UPS / TNT , တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်;
2. အသုတ်ကုန်စည်များအတွက် Air လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်ပြင်အားဖြင့် FCL အဘို့, လက်ခံရရှိလေဆိပ် / ဆိပ်ကမ်း;
ကုန်တင် forwarding သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းရေကြောင်းနည်းလမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း 3. Customer များ!
4. Delivery အချိန် : နမူနာဘို့ 3-7 ရက်အတွင်း; အသုတ်ကုန်စည်များအတွက် 5-25 ရက်။
1. ငွေပေးချေမှုရမည့်: T / T, အနောကျပိုငျးသမဂ္ဂ ( ငွေပေးချေမှု-အွန်လိုင်း )
2.All အဓိကအကြွေးကဒ်များကိုလုံခြုံငွေပေးချေမှု processor ကိုတစျဆငျ့ကိုလက်ခံနေကြတယ် အာမခံငွေ.
Yiwu ဟန်နေ့စဉ် N ကို ecessities Co. , ။ Ltd. , ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနဲ့ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မြို့ပြအိမ်ကသိုလှောင်မှုစီးရီးအာရုံစိုက်, ခြောက်လနျဌာနခှဲန်ထမ်း 1000 ကျော်ကလူတစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများထက်ပိုနိုင်ငံပေါင်း 20 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများထက်ဥရောပ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတင်ပို့နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဖက်ရှင်နဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်, အရောင်ဖက်ရှင်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်း, ထိပ်တန်းနည်းပညာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရလိုက်နာခြင်း, ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဆွေများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လာလမ်းညွှန်မှု, စီးပွားရေးညှိနှိုင်းမှုကြိုဆိုပါတယ်။
"စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်လက်တွေ့, ရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်သော" ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝိညာဉျကို "အရည်အသွေးအားဖြင့်ရှင်သန်နှင့်ချေးငွေအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုး" ၏ andthe လုပ်ငန်းသဘောတရားနှင့်အညီ
ယခင်: မီးဖိုချောင်ထဲက Tools ဂျုံ Fiber ရေမြှုပ်သိုလှောင် HANYING တောင်းရေချိုးအဝတ်စသို့မဟုတ်အိမ်သာဆပ်ပြာစင်၏စည်းရုံးရေးမှူးရေမြှုပ်ယိုစီးမှု Holder ထိန်သိမ်း
နောက်တစ်ခု: hot ရောင်းရေချိုးခန်းအမှိုက်ပုံးထဲသို့အိမ်ထောင်စုမီးဖိုချောင်ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပုံးထဲသို့ဧည့်ခန်းများအတွက် Bin ကိုဖြုန်းတီးနိုင်သလားနိုင်သလား
မီးဖိုချောင် tools များ
hot ရောင်းသုပ်တိုးတက်မှုနှုန်းမီးဖိုချောင်သုပ်တိုးတက်မှုနှုန်း mu ...
လက်ကားခေတ်သစ်သစ်ကိုဒီဇိုင်း Dirt Decontaminatio ...
မီးဖိုချောင် Desktop ကို Hollow တူကေ့မီးဖိုချောင် ...
ဥရောပနှင့်အမေရိကန် TOP ပလတ်စတစ်ပွင့်လင်း Cer ...
hot ရောင်းရန်လက်တွေ့မီးဖိုချောင်ပွင့်လင်းအိတ်ရေစာ Clam ...
ပြီးပြည့်စုံသောမီးဖိုချောင်ပေါင်မုန်မုန့ Toast Bun Cu ခေါက် ...